Waa maxay shaqada sariirtu? -Warshad Alice
Soo-saareyaasha bixiya adeegyada OEM ee lagu dhejiyo summada tayada sare leh
Summada Dhalada Birta
Calaamadda Nickel ee Electroformed
Summada birta aan-dhalatada lahayn
Shaqada sariirta ayaa ah in ay qanciso hurdada maalinlaha ah ee bini'aadamka, si loo duubo loona kormeero miisaanka, naqshadeynta waxay u egtahay in ay noqoto mid caqli-gal ah.
Waxaa jira afar nooc oo gogosha alaabta qadiimiga ah, kuwaas oo kala ah sariir, sariirta Arhat, sariirta sariirta, iyo sariirta Babu. Labada danbe waxa loo isticmaalaa oo kaliya gogosha hurdada; halka labada hore ay leeyihiin shaqada fadhiga hurdada ka sokow. Waxaa jira laba nooc oo hurdo ah Shiinaha hore: hurdo weyn iyo hurdo. Hurdo weyn macnaheedu waa hurdo rasmi ah habeenkii. Hurdada waxaa loola jeedaa hurdo hurdo ah sida nasashada qadada. Sariiraha sariiraha iyo sariiraha Arhat waxaa loo isticmaalaa hurdo la'aan waxaana loo isticmaali karaa in lagu madadaaliyo martida, halka sariiraha sariiraha ah iyo kuwa babuska loo isticmaalo hurdo waaweyn. Looma isticmaali karo martigelinta.
Kahor Boqortooyadii Han, hab-nololeedkii Shiinuhu waxa ay ahayd in ay fadhiistaan ​​dabaqa, sidaa awgeed waa in xarunta noloshu ay ahaataa agagaarka goobta la seexdo, soo dhawayntuna waxa ay ahayd mid ku wareegsan qolka hurdada ee mulkiilaha. Muddo ka dib, aragti heersare ah oo ku saabsan soo dhawaynta dadka Shiinaha ayaa la sameeyay. Kahor Boqortooyada Qing, xitaa sannadihii hore ee Jamhuuriyadda Shiinaha, heerka ugu sarreeya ee martigelinta Shiinaha ayaa had iyo jeer saarnaa sariirta ama kang. Shaqada ugu weyn ee sariirta iyo sariirta Luohan maaha hurdada, laakiin martigelinta.
Halkan ku caddeeyo: Waxa kor ku xusan waxa ay ka yimaaddaan internetka, waxa ku jirana waxa loogu talagalay tixraacaada oo keliya. Haddii aad ku xad gudubto xuquuqdaada, fadlan nala soo xidhiidh oo waanu tirtiri doonaa isla markaaba.
Taarikada magaceedu waxa ay leedahay codsiyo aad u balaadhan, waxaana lagu arki karaa meel kasta oo nolosha ka mid ah, sida maqalka, qalabka guriga, talaajadaha, kombayutarada, alaabta ammaanka, iwm, kuwaas oo loo isticmaali karo calaamadaha. Waxaannu samaynaynay taargooyin magacyo ah muddo 21 sano ah, waxaanan leenahay khibrad gaar ah. Anaga (Alice) waxaanu nahay soo-saare xirfad leh oo samaysa taargooyinka alaabta guriga. Waxaan soo saari karnaa zinc alloy, aluminium, copper, brass, pvc, iwm. Shirkaddu waxay leedahay cilmi-baaris dhamaystiran iyo horumarinta, naqshadeynta, wax soo saarka, iibka, nidaamka adeegga, xuquuqda ganacsiga, 5 patents qaranka iyo xuquuqda ganacsiga, aag warshadeed oo ah 2,000 square mitir, iyo in ka badan 100 shaqaale ah.
KA HOR Waa maxay dhererka iyo ballaca warshadda sariirta-Alice
Dayactirka joodariga-warshada Alice XIGTA